Home Wararka Dagaalka Farmaajo & Rooble oo cirka isku shareeray…
[XOG] Dagaalka Farmaajo & Rooble oo cirka isku shareeray…
Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sii kala fogaanaya labadii toddobaad ee ugu danbeeyay kadib markii uu si rasmi ah usoo shaac baxay khilaaf u dhaxeeya.
Si kastaba, waxaa hadda muuqata in khilaafkaas aan weli xal laga gaarin, islamarkaana ay suurta-gal tahay inuu kasii daray, kadib markii tallaabooyin uu qaaday Rooble ay muujiyeen heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka kala dhaxeeya Farmaajo.
Sidoo kale, ra’iisul wasaare Rooble ayaa loo badinayaa inuu ogolaan doono habraac doorasho oo gadaal ay ka riixayaan madaxda maamul goboleedyada oo la doonayo in laga soo saaro shirka Muqdisho.
Habraacan oo la xiriira doorashada xildhibaanada golaha shacabka, ayey madax goboleedyada ay isku dayayaan inay awoodda maamulka doorashada ugala wareegaan guddiga doorashada heer federal.
Ra’iisul Wasaare Rooble, ayaa lagu warramay inuu dagaalka uu Farmaajo kula jiro dartiis uu u ogolaan doono habraaca, si loo beegsado awoodaha fulineed ee guddiga doorashada.
Madax goboleedyada qaarkood ayaa ku doodaya in guddiga heer federal badankiis ay yihiin kuwa ku xiran madaxweyne Farmaajo, sidaas darteedna ay tahay sababta ay u doonayaan in maamul goboleedya la siiyo awood dheeri ah, si looga hortago in Villa Somalia ay musuq-maasuqdo doorashada Golaha Shacabka.
Sidaas darteed, si uu Farmaajo u beegsado ayaa lagu warramay in Rooble uu ogolaan doono habraacan, taasi oo dhabarjab ku noqon doonta qorshaha doorasho ee Farmaajo.
Dhacdooyinkan ayaa muujinaya xiriirka sii xumaanaya ee Farmaajo iyo Rooble, xitaa iyadoo dalku isku diyaarinayo qabashada cod-bixinta baarlamaanka, waxayna tani saameyn ku yeelan kartaa rajada dib u doorasho ee Farmaajo.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa loo doortay inuu hoggaamiyo doorashooyinka dalka markii tiro daneenayaal ah ay ka biyo diideen sida Farmaajo iyo kooxdiisa u maamulayaan doorashada dalka.
Doorashada Soomaaliya ayaa la qaban doonaa 10-ka October kadib heshiis ay Muqdisho ku saxiixdeen madaxda Maamul Goboleedyada dalka iyo Ra’iisul Wasaare Rooble, inkastoo laga cabsi qabo inay dib uga dhacdo waqtigaas.